ʿत्यसैले सेल्फी किङ्ग मा हास्य कलाकारको सट्टा विपिन रोज्यौंʾ :: Setopati
उनले ʿसेल्फी किङ्गʾ झण्डैझण्डै पाँच सय पटक बढी हेरिसके रे। पाँच सय पटक हेरिसकेपछि उनी आफू निर्देशित सिनेमा राम्रो हो की नराम्रो हो भनेर गेस गर्ने अवस्थामा पनि छैनन रे। त्यसरी सोच्ने घेरा नै धमिलो भइसकेको उनको दाबी छ।
यस्तो अवस्थामा पुग्ने व्यक्ति हुन् माघ २४ गते रिलिज हुने लागेको विपिन कार्की स्टारर ʿसेल्फी किङ्गʾका निर्देशक विशाल सापकोटा। आफैले लेखेको कथा-पटकथामा निर्देशकका रुपमा नेपाली रजतपटमा डेब्यू गर्दैछन्। डेब्यू सिनेमाबाट उनी सुखद् नतिजाको आशा गरिरहेका छन्।
सिनेमाको बारेमा सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै गर्दा उनी सिनेमाको रिलिज मितिको निकट आगमनलाई लिएर एकातीर उत्साहित त छँदै थिए, अर्को तीर नतिजा कुरिरहेको विद्यार्थी जस्तो आतिएको पनि। उनै निर्देशकसँग सेतोपाटीका लागि अशेष अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
* ʿसेल्फी किङ्गʾ के हो? यसको अर्थ खुलाइदिनुस् न?
-ʿसेल्फी किङ्गʾको मूख्य भूमिकामा विपिन कार्कीले अभिनय गर्नुभएको छ। सिनेमाभित्र उहाँ एउटा लोकप्रिय हास्य कलाकारको भूमिकामा हुनुहुन्छ। सो पात्र ʿसेल्फी किङ्गʾ नाम बाट चर्चित छ। सिनेमाको नाम त्यसैबाट जुराइएको हो। यसले ३ दिनमा एउटा हास्य कलाकारले भोगेको कथा सिनेमामा छ। सिनेमाले एउटा सेलिब्रेटीबाट एउटा मान्छेका रुपमा उसको भोगाइलाई प्रस्तुत गर्छ। वास्तविक नाम गोपाल दाहाल भएपनि ऊ दर्शकमाझ ʿसेल्फी किङ्गʾ को नामले परिचित छ। ʿसेल्फी किङ्गʾ ले चर्चित बनेको गोपाल दाहालको वस्तविक्ता नै ʿसेल्फी किङ्गʾ हो।
* डेब्यू सिनेमा हो, कथा-पटकथा आफ्नै छ। डेब्यूका लागि यही सिनेमा छान्नुको कारण के हो र यसको कथा मनमा कसरी बिझायो?
- हास्य कलाकारको काम हँसाउने हो। पीडामा हुँदा गायकले पीडाको गीतमा अझ पीडा महशुस गराउन सक्छ तर हास्य कलाकारले आफू पीडामा हुँदा के गर्छ, कसरी अरुलाई हसाउँने गर्छ भन्ने कुरा मनमा आएपछि यसको कथा बनाउन शुरु गरिएको हो। यसलाई विभिन्न मानेमा खोज्दा यसमा सिनेमा बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेपछि हो।
* यो कुनै व्यक्ति वा घटनामा प्रेरित हुनुभयो की केबल मनमा स्वउत्पन्न सोचको नतिजा हो?
- मेरो बुवा, काका सिनेमा उद्योग मै भएकाले धेरै कलाकारसँग मेरो पनि संगत छ, चिनजान छ। उनीहरुसँगको कुराकानी र भेटघाटमा उनीहरुलाई दुःख पर्दा हसाउनुपर्‍यो भने के गर्लान भन्ने सामान्य जिज्ञासाले यसलाई जन्माएको हो। मेरो काका पनि हास्य कलाकार हो। उहाँ दर्शकमाझ 'हर्के हब्ल्दार'को नामले चर्चित हुनुहुन्छ। उहाँसँग बस्दै जाँदा एक दिन कुरा गर्दै जाँदा यस्तो भए के गर्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई सोधे। स्टेजमा गएपछि गर्नुपरिहाल्छ नी भनेर उहाँले जवाफ दिनुभयो। मलाई ओहो! यसमा सिनेमा बन्छ की लाग्यो।
* अनि कथा त उहाँकै भन्ने चर्चा पनि छ त ?
- होइन। कतिले यो काकाकै बायोपिक जसरी भनिरहेका छन् तर होइन। उहाँसँगको छलफलबाट कथा जन्मेकोचाँहि हो।
* निर्देशकका रुपमा आफ्नो सिनेमा कस्तो बनेको छ? आफ्नो दृष्टीसँग कति निकट छ?
- यसको कथा मैले लेखें। निर्देशन गरें, संपादनमा बसें, ब्याकग्राउन्ड आदिमा बसें। यति भइसक्दा मैले पाँचसय पटक बढी सिनेमा हेरिसकें हुँला। यसले गर्दा म अहिले यो सिनेमा राम्रो-नराम्रो बन्यो भन्ने अवस्थामै छैन। तर गरेको काममा सन्तुष्ट छु। जे सोचेर बनाउन हिँडेको थिएँ त्यो बनाएको छु भन्ने सन्तुष्टीचाँहि छ। भोलि मैले बनाएको सिनेमासँग दर्शकले आफूलाई जोड्न सक्नुभयो र मनपराउनुभयो भने म सफल भएँ ठान्नेछु।
* डेब्यू निर्देशकका रुपमा आफ्नो मनमा चलिरहेका कुराहरूचाँहि के हुन्?
- ढाँट्ने कुरा हुन्न अलिअलि आत्तिने त भइहालिन्छ तर म त्यो भन्दा बढीचाँहि उत्साहित छु। आफूले सोचेको एउटा कथालाई ठूलो पर्दामा देशका राम्रा राम्रा कलाकारको साथमा ल्याउन सकें भन्ने कुराले धेरै उत्साहित छु। सिनेमाका दृश्यहरुमा दर्शकले कसरी प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्ने जिज्ञासा छ मेरो मनमा।
* सिनेमाको मुख्य भूमिकामा विपिन कार्की हुनुहुन्छ, यो सिनेमामा उहाँको भूमिका कति नविन देखिएला?
- सिनेमामा उहाँ दुईवटा पात्रका रुपमा देखिनुहुनेछ। एउटा गोपाल नामको पात्र र अर्को ʿसेल्फी किङ्गʾ । गोपालका रुपमा उहाँको पात्र अन्य सिनेमाका भन्दा फरक पाइनेछ। यस किसिमको भूमिका पहिले गर्नुभएको छैन।
* 'ʿसेल्फी किङ्गʾ 'ले विपिनलाई बेच्छ की विपिनले 'ʿसेल्फी किङ्गʾ '?
- यो परिपूरक भएर जान्छ होला।
* सिनेमाको कथा हास्य कलाकारको यथार्थसँग नजिक हो की कल्पनाशिलता हाबी छ?
- सिनेमामा मेलो ड्रामा त छैन। सिनेमामा हामीले गोपाल नामक पात्रलाई तीन दिन माइक्रोस्कोपिक रुपमा हेर्छौं। परम्परागत कथा लेखन शैली-संरचनामा छैन यो। अलिकति प्रयोगात्मक पनि छ।
* हास्य कलाकारको कथामा किन कोही हास्य कलाकारलाई लिइएन। त्यसो गर्दा अझ बढी यथार्थ आउँथ्यो होला?
- जस्तै केदार घिमिरे 'माग्ने बुढा'को रुपमा चर्चित हुनुहुन्छ। सिनेमामा उहाँलाई कास्ट गर्दा दर्शक त्यो 'माग्ने बुढा'को प्रभाव भन्दा उता जान सक्नुहुन्न। मेरै काकालाई नै हेरौं न। दर्शकले पर्दामा उहाँलाई गोपालका रुपमा स्वीकार्ने बेलासम्म सिनेमा धेरै अगाडि बढिसकेको हुनुपर्छ। तर विपिनलाई कुनै टाइपोकास्ट भूमिकाले छोपेको छैन। यसले दर्शकलाई चाँडो कन्भिन्स गर्न सकिन्छ। सिनेमामा उहाँलाई ʿसेल्फी किङ्गʾ तथा 'गोपाल'का रुपमा कन्भिन्स हुनलाई धेरै समय लाग्दैन। उहाँले ती इमेजलाई चाँडो बिर्साउन सक्ने भएकाले लिएका हौं।
* भोलि यसमा त कोही हास्य कलाकार नै ठीक हुन्थ्यो नि भन्ने प्रश्न उठे के गर्नुहुन्छ?
- यही नै हुन्छ। हास्य कलाकारहरूको छवि-लोकप्रियता एउटा पात्रले नै निर्माण भएको हुन्छ। म त्यो किसिमको छविबाट मुक्त हुन चाहन्थे। मैले त्यही गरेको हो। यसमा भोलि यी प्रतिक्रियाले म परिवर्तित हुँदिन किनकी यो धेरै सोचेर लिइएको निर्णय हो।
* पछिल्लो समय धेरै सिनेमाहरु कथाको हिसाबले नौलो देखिन्छ तर सिनेमाका रुपमा तिनको प्रस्तुतिकरण फितलो र अल्लो हुने गरेको छ, तपाईको सिनेमा यो मानेमा कस्तो छ?
- उहाँहरुले आफ्नो उत्कृष्ट दिएर नै सिनेमा बनाउनुभएको होला। यस सिनेमामा मैले पनि आफूले सकेको उत्कृष्ट दिने कोशिस गरेको छु। थुप्रै कुरामा म प्रयोगात्मक हुने प्रयास गरेको छु। अब यो किसिमको हाम्रो प्रयासले सफलता दिन्छ कि के गर्छ त्यो पछि थाहा होला।
* सिनेमाको फस्ट लुक आएपछि धेरैले हलिउड सिनेमा 'जोकर'बाट कपी गरिएको भन्ने प्रतिक्रिया पनि दिए?
-'जोकर'को मेकअप क्लाउनको हो, हाम्रो त्यो होइन। यो पहिला नै बनाइएको लुक हो। 'जोकर' सिनेमा त्यही समयमा रिलिज भएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १७, २०७६, ०३:०७:००